Bovine Heparin, Halal Heparin, Diyaarinta Dalteparin - CSBIO
dheeraad ah >>
waxa aan qabanno
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2000. 19kii Ogosto 2011, shirkadda waxaa lagu qoray Suuqa Ganacsiga Kobaca ee Shenzhen Stock Exchange (saamiga kaydka 300255). Shirkaddu waxay leedahay afar saldhig oo wax soo saar ah, sagaal kaabayaal, laba shirkadood oo dibedda ah iyo laba shirkado oo iskaashi wada leh. Shirkaddu waa shirkad dawooyinka bayoolaji ah, isku-darka cilmi-baarista iyo horumarka, wax-soo-saarka, iibinta, iyo soo-dejinta iyo dhoofinta ganacsiga. Waa shirkad farsamo sare leh oo leh alaabooyin laga soo saaray alaabada heparin cayriinka ah ee duritaanka culeyska heparin-kiliikolojiyo iyo silsilad warshadeed oo heparin dhameystiran oo duurka ku ah heparin, iyo shirkad hormuud u ah wax soo saarka alaabada gudaha heparin.
Tayada badbaadada, maaraynta hufnaanta, daacadnimada iyo sumcadda, hal abuurka iyo horumarka.
Had iyo jeer tayada saar meesha ugu horeysa oo si adag u ilaali tayada sheyga ee geedi socod kasta.
Warshadeena ayaa ku kortay shirkad soo sareysa Premier Certified ah oo tayo sare leh, Alaabada Qiimaha-Saameynta
Shirkaddu waa shirkad dawooyinka bayoolaji ah, isku-darka cilmi-baarista iyo horumarka, wax-soo-saarka, iibinta, iyo soo-dejinta iyo dhoofinta ganacsiga
Sebtember 28, 2000
68 milyan oo doollar
Wadarta dhoofinta sanadka 2019
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2000.
Hebei Changshan Biochemical Pharmaceutical Co., Ltd (oo hadda loo yaqaan "Shirkadda") isha laga helo heparin sodium alaabta ceyriinka ah iyo cirbadda heparin sodium waxay ka gudubtay Adeegga Shahaadada Shandong Halal Co., Ltd. (SHC) baaraha goobta sida laga soo xigtay MUI. HAS23000 iyo MS1500: 20 ...
Csbio: Waxaa loogu deeqay in kabadan 2 Milyan Yuan oo ah daawada Heparin si looga caawiyo ka hortaga cudurada faafa iyo xakamaynta
Shirkadda 'Shanghai Securities News' ee Shiinaha. Daawooyinkaani waa dhamaan daawooyinka heparin sida deg deg ah loogu baahan yahay daaweynta bukaanada qaba cudurka sambabka ee wadno xanuunka ...
Waqtigan xaadirka ah, shirkaddu waxay dhammeystirtay shaqadii ku habboonayd ee cilmi baarista wejiga 2aad iyo diyaarinta baaritaanka tijaabada caafimaad ee wejiga III ee durista Albenatide. Marka loo eego natiijooyinka tijaabada caafimaad ee horudhaca ah iyo shuruudaha oggolaanshaha tijaabada caafimaad ee duritaanka Albenatide, marka lagu daro dhabta ...